July 9, 2020 885
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनु’सार नेपालमा हालसम्म कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या १६ हजार ५ सय ३१ पुगेको छ।
हाल’सम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या भने ७ हजार आ’ठ सय ९१ पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार प्रदेश १ मा अहिलेसम्म ७ सय ३९ जनामा को’रोना पुष्टि भएको छ।
जसमध्ये १९६ जनाको उपचार भइरा’खेको छ भने ५ सय ४३ जना डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो २४ घण्टामा भने दुई जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
प्रदेश २ मा ४ हजार दुई सय ६२ जनामा कोरो’ना पुष्टि भएको छ। जसमध्ये दुई हजार २४ जना उप’चार गराइरहेका छन् भने २२ सय ३४ जनाले कोरोना जितेका छन्। हालसम्म प्रदेश २ मा कोरोनाका कारण ४ जनाले ज्या’न गुमाएका छन्। पछिल्लो २४ घण्टामा ९ जना’मा कोरोना पुष्टि भएको छ।
त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा ७ सय २२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। जसमध्ये ४२९ जनाको उपचार भइराखेको छ भने २८७ जना’ले कोरोना जितेका छन्। बाग’मतीमा मात्र कोरोनाले ६ जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा १२ जनामा कोरो’ना पुष्टि भएको मन्त्रा’लयले जनाएको छ।
त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा १२ सय २२ जना’मा कोरोना पुष्टि भएको छ। जसमध्ये ८६२ जनाको उपचार भइरहेको छ भने ३५५ जनाले कोरोना जितेका छन्।
पछिल्लो २४ घण्टामा १८ जनामा संक्र’मण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । हालसम्म गण्डकी प्रदेशमा कोरो’नाका कारण पाँच जनाले ज्या’न गुमा’एका छन्।
प्रदेश ५ मा अहिलेसम्म ४ हजार ३३ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। जसमध्ये १७ सय २७ जनाको उपचार भइरहे’को छ भने २२ सय ९६ जना डिस्चार्ज भ’एका छन्। पछिल्लो २४ घण्टामा ९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा संक्र’मितको संख्या १६ सय ४७ पुगे’को छ। जसमध्ये ४०५ जनाको उपचार भइरहेको छ भने १२ सय ३८ जनाको डिस्चार्ज भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा ४ जनाले ज्या’न गुमाएका छन् ।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश’मा भने अहिलेसम्म तीन हजार ९ सय ६ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। जसमध्ये २९ सय ६२ जनाको उपचार भइराखेको छ भने ९ सय ३८ जना डिस्चा’र्ज भएका छन्। कोरो’नाकै कारण ६ जनाले ज्या’न गुमाएका छन्को ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल’सम्म कोरोनाका कारण ३५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७२ जिल्लामा कोरोना संक्रमित रहका छन् । अन्य पाँच जिल्लाका कोरो’ना संक्रमित सफल उपचार’पछि घर फर्किएका छन् ।
मन्त्रालयले दिए’को जानकारी अनुसार धनकुटा, भोजुपर, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र हुम्लामा भेटिएका सबै कोरोना संक्र’मित उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। – खबर हब
Prevसार्वजनिक यातायात खोल्ने सरकारको निर्णय, यस्तो छ नियम…हेर्नुहोस्
Nextभोलि असार २६ गते बिहीबार को राशिफल हेर्नुहोस्….
कुनैबेला नेपालको पस्मिना सल बेच्थे शिल्पा शेट्टीका श्रीमान्, त्यसपछि अर्को व्यापार गरेर फेरियो भाग्य
टिका सानुलाई केटो खोजिदिए मानसिंहले, सुटिङमै चल्यो खत’रा दोहोरी (भिडियो हेर्नुहोस)